Appendicitis: ọrịa nke mmepeanya - Afrikhepri Fondation
Ntinye: ọrịa nke mmepeanya
Pa Renaissance Black
Na-agụ: 8 min
Theappendicitis, bụ mbufụt nke vermicular appendix, nke bụ obere ikpuru-etolite diverticulum emi odude ke utịt akwa eriri afọ, nso cecum, na ala n'aka nri nke afọ. Isi mmalite nke ngwa ngwa appendicitis na-emetụtakarị na mgbochi nke oghere appendix (akụkụ ahụ na-enweghị ọrụ a maara na ụmụ mmadụ) site na nsị, mana enwere ike ibute ọrịa. . N'ihi mgbochi ahụ, imi na-ewuli elu ma na-eme ka ngwa ahụ gbasaa, nke na-aghọ mkpali ma nwee ike ibute ọrịa. Appendicitis nwere ike ime n'oge ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ na-ahụkarị ụmụaka.
Mwakpo dị ukwuu nke appendicitis na-amalite site na mgbu mgbu dị oke oke, n'ihi mgbatị nke ngwa, nke na-e mimomi nke colic. Mgbu ahụ na-esikwu ike ma bụrụ akụkụ ya n'akụkụ aka nri n'akụkụ ziri ezi, nke a na-akpọ isi okwu Mc Burney. Nke a dị n’elu ahịrị na-esonye n’elu elu iliac ọkpụkpụ na otube. Ọnọdụ ihe mgbu ahụ dịgasị iche, agbanyeghị, dabere na ọnọdụ nke mgbakwunye. Ọ bụrụ na mgbakwunye dị n'akụkụ azụ, dị ka ọ dị na ngwa azụ, a ga-atụgharị mpaghara na-adịghị mma nke na-eso ọnọdụ nke ngwa mgbakwunye ahụ.
Mgbaàmà ndị ọzọ gụnyere oke ọkụ na oke nri. Akpịrị na ọgbụgbọ bụ ihe ịrịba ama na-adịghị agbanwe agbanwe. Nnyocha nke mkpụrụ ndụ ọbara na-egosikarị ngafe nke polynuclear neutrophils, otu ụdị mkpụrụ ndụ ọbara ọcha na njedebe nke ndụ ha.
Ọ bụrụ na mbufụt nke mgbakwunye ahụ dị oke, mgbidi nke ngwa ahụ nwere ike ịgbawa na ọrịa ahụ gbasaa n'ime oghere afọ, nke na-akpata peritonitis.
Naanị ọgwụgwọ maka appendicitis bụ appendectomy, nke bụ mwepụ nke mgbakwunye.
Nyocha CRBM na appendicitis
Kemgbe ihe karịrị afọ iri, a na-eme ọmụmụ banyere appendicitis na CRBM, Center for Bio-medical Research of Doctor Bitsindou na nsonaazụ ya bụ ndị a:
Ndepụta bụ ọrịa, na-emegide echiche ahụike nke otu, nke na-abịakwute otu ìgwè nke ndị mmadụ, dị ka ekwuputara ya n'elu, na ọha mmadụ na karịsịa ụmụaka, ndị na-eto eto na nke ahụ metụtara ihe oriri , ya mere na ihe oriri. N'ezie, nnyocha e mere na CRBM ná mba ọzọ, na Kiev na Ukraine na Congo-Brazzaville ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri, gosipụtara na appendicitis abụghị ihe anyị maara banyere ya nakwa na ihe odide ntụkwasị ahụ nwere ọrụ pụrụ iche n'ime afọ mmadụ.
Akụkụ nke ihe odide vermicular na ihe kpatara appendicitis na ahụ mmadụ.
Ka ọ dị ugbu a, nchọpụta sayensị e mere na arụmụka a na-ekwukarị na ihe odide vermicular ahụ adịghị achọpụta kpọmkwem mmetụta nke akụkụ ahụ a na-akpa na ahụ mmadụ, ma ọmụmụ ndị e mere na CRBM, Center Research Center Dr Bitsindou na-agwọ ọrịa bio ruo ọtụtụ afọ, nyere ya ihe karịrị ihe ijuanya.
N'ezie, oru sayensị nke CRBM gụnyere ịme ihe banyere ọrịa ntiwapụ na appendicitis, ọrịa a na-ahụkarị na ọha mmadụ. Site na nke a karịa ọmụmụ sayensị, ọ na - apụta ihe ndị a:
Na ngwa ngwa vermicular bụ akụkụ nke cecum, nke nwere ọrụ dị oke mkpa ma dịkwa mkpa na ndụ mmadụ. N'ezie, ngwa ngwa vermicular bụ ngwụcha ngwụcha nke cecum nke na-ekwupụta n'ahụ ahụ oke nke ụdị ụfọdụ nke ụmụ nje, ọkachasị ndị na-emepụta gas na akụkụ nri na ọkachasị na cecum. Njupụta nke ụdị a nke ụmụ nje dị na tract digestive bụ ihe egwu nye organism, n'ihi na ọtụtụ bụ ndị na-emepụta gas na toxins nke na-emepụta meteorism ma na-eyi ndụ onye ọrịa egwu ma na-akwalite ọdịdị nke appendicitis. Olee otú? 'Ma ọ bụ' Gịnị?.
N'ezie, ụfọdụ ụmụ nje dị ka Clostridium Botulinum bụ ụmụ nje na, site na ha metabolism, na-emepụta gas na toxins nke na-akpata ụfọdụ nnukwu, ọrịa siri ike na mgbe ụfọdụ ọrịa dị ka botulism.
Na appendicitis, dị ka ọmụmụ emere na CRBM, enwere mmụba mbụ nke ụmụ nje na eriri afọ na ọkachasị ndị na-emepụta gas. Na njupụta nke gas nke mepụtara na eriri afọ, na-akpata ọzịza nke nnukwu eriri afọ na ọkachasị nke cecum na ya mere nke ngwa ahụ vermicular, nke a hụrụ ka ọ meghere ma mee ka ọ banye na nsị nke nwa ebu n'afọ, n'ihi nsị. emeputa site na otutu microbial. N’agaghị echezọ na ngwa ngwa vermicular bụ mgbe enweghị ntụpọ. N'ihi ya, na symptomatology nke appendicitis, e nwere a syndrome nke intermittent pasty na stools siri ike. Otu n'ime ihe ịrịba ama ndị dọkịta na-atụkarị uche, n'ihi na a maghị ha n'ezie, bụ ọdịdị nke farts na mmalite nke ọrịa ahụ. N'ezie, oge a amaghị ndị dọkịta oge a na-akpọ oge incububation. Ọ na - akọwa oge mgbe microbial proliferation na - abawanye na eriri afọ yana ọkachasị na akụkụ nke mpaghara. A na-ekwupụta ịrị elu a dị egwu na mmụba microbial, ya mere nke gas na toxins, site na mbufụt nke ngwa ngwa vermicular, yabụ dịka ụdị mkpu, si otu a na-ekwuwa na nrụgide gas dị na cecum abịarutela etu ọ dị dị ize ndụ: Nke a bụ ọrụ a na-amaghị ama nke ngwa ngwa ahụ dị na tractes digestive mmadụ. N'ihi ya, appendicitis bụ ihe ịdọ aka na ntị banyere mbubata gas na nsị nke cecum site n'aka ụfọdụ ụmụ nje na ọkachasị ndị ndị metabolism na-emepụta gas na toxins. Olee otú? 'Ma ọ bụ' Gịnị?
Ugbu a cecum bụ ndọtị nke eriri afọ nke dị warara nke wee mepee n'ime ụdị akpa nke ala ya dị na ala ya: ọ bụ akụkụ nke eriri afọ nke nnukwu eriri afọ nke na-agwụ na na vermicular ngwa. Ya mere, mmụba nke ụmụ nje, ọkachasị gas na toxins ha n'akụkụ a nke na-arịgo colon bụ ihe egwu, egwu nke peristalsis, usoro a na-esi eme ka nri bolus na-asọga n'akụkụ ike iji wepụ ya. Inertia nke akụkụ a nke nnukwu eriri afọ dị na mmalite nke colopathy na-arụ ọrụ na ọtụtụ ọrịa na ụmụ mmadụ. N'ihi ya, mmụba microbial, gas ha na toxins na-egbochi peristalsis n'akụkụ a nke nnukwu eriri afọ, si otú a na-egbochi mwepụ nke nri bolus na ike ịpụpụ na ọnọdụ a na-adịghị mma na-akwalite nlọghachi nke ihe mkpofu na nsị n'ime ọbara , nke na-egbochi nje. Yabụ iji zere nke a, ọdịdị na-eme ihe ọfụma, ngwa ngwa vermicular na-eme site na igbanye: ọ bụ ya mere ọmụmụ nke appendicitis, ihe butere ọrịa ndị ọzọ ka njọ. N'ezie, nkwekọrịta nke eriri anụ ahụ dị na mpaghara mpaghara ga-abụ ihe dị mkpa, iji mee ka nri nri na-arịgo elu n'akụkụ colon na-arịgo na colon transversum wee banye na eriri afọ na-agbada site na ike. . N'ihi ya, cecum bụ akụkụ kachasị mkpa nke akụkụ nri, n'ihi na ọ bụ site na ya ka a na-ewepụ ihe mkpofu nke metabolism na mgbochi nke peristalsis na-egbochi usoro dum nke mgbaze, nke nwere ike ịbụ mbido ọtụtụ ọrịa.
Ná nchịkọta, anyị pụrụ ikwu na appendicitis bụ n'ihi mmụba nke ụmụ nje na cecal akụkụ nke colon, gụnyere, ụmụ nje onye metabolic ọrụ na-arụpụta gas na nsị. Nke a na akụkụ nke colon doro a nsogbu na tọrọ tinyere vermiform odide ntụkwasị nke na-ahụ ya ọnụ oghe n'okpuru gas nrụgide ewepụsị ihe feces, agaghinihu ha site ụmụ nje proliferate, nke site na-akpata ihe ngbu nke mgbidi dị n'ime ya.
Ihe ndị na-amasị mmadụ, appendicitis
Kama ịbụ ọrịa a ketara eketa, appendicitis bụ ọrịa nke metụtara nri.
N'ezie, ọmụmụ emere na Ukraine na Kiev n'afọ 1984-1987 na Congo-Brazzaville n'ime afọ 1988-1994, gosipụtara n'ụzọ doro anya na appendicitis bụ ọrịa nke na-adịkarị karịa na Europe karịa nke Europe. nwa ojii, ọbụlagodi na afọ ndị na-adịbeghị anya, ihe a na-egosi na ọ bụ mmalite ya na mpaghara Sahara Africa. Yabụ kedu nri a ga - akwalite appendicitis?
Site na ọmụmụ ihe a, ọ dị ka appendicitis bụ ọrịa nri, nke gosipụtara site na mgbasawanye ya na ọdịbendị nri. N'ezie na obodo Europe, ikpe nke appendicitis dị ọtụtụ karịa n'Africa, bụ nke a na-enyo enyo n'ihi na usoro nri na-agbanwe na mpaghara Africa. Otu ihe na-akpata appendicitis dị ka nri nri bụ ị consumptionụkarị mmiri ara ehi na ihe ndị na-eme ya. N’ezie, a na-a milkụkarị mmiri ara ehi na ihe ndị mepụtara ya na Yurop, ya bụ na mba ndị ka baa ọgaranya ma nwekwuo “mmepeanya” karịa n’Africa, nke pụtara ìhè. Ugbu a, mmiri ara ehi bụ usoro ọdịbendị dị mma maka ọtụtụ nje bacteria nke na-amịpụta gas na nsị, na mmiri ara ehi na-adịgide adịgide ma ọ bụ ihe ndị sitere na ya bụ ihe na-akwalite pathogenesis akọwapụtara n’elu nke appendicitis. Eziokwu ọzọ nke na-emetụta mmiri ara ehi bụ nzaghachi nke ọmụmụ ntụnyere emere n'etiti obodo na obodo dị na Central Africa, ọkachasị na Congo-Brazzaville na ugboro ugboro nke appendicitis. N'ezie, nchọpụta a na-emekọ na mpaghara Pool, na mpaghara nke Kinkala na Mindouli, gosipụtara na okwu ole na ole nke appendicitis edere na mpaghara ahụ, na-ekwukarị ndị na-eto eto nwere nri mmiri ara ehi a kemgbe obodo na obodo kwesịrị ekwesị, ndị agadi ma ọ bụ ndị na-eto eto bụ ndị mepụtara àgwà iri nri a, ya mere, ọrịa a. Na njedebe, ọmụmụ ihe ahụ kpughere na ọrịa appendicitis dị ọtụtụ na obodo karịa na mpaghara ahụ, nke a ga-enwe ike ịkọwa ya site na nri, ya mere, site na omume nri.
N'ikpeazụ, nchọpụta ahụ gosiri anyị na na Congo dịka ọmụmaatụ, appendicitis bụ ụdị ọrịa a na-ahụkarị n'obodo ahụ karịa n'ógbè ndị ahụ. O gosipụtakwa na, n'etiti ndị Europe na ndị Africa, appendicitis bụ ihe a na-ahụkarị na Europe karịa karịa na mba Africa, nke na-enye ya aha nke ọrịa nke mmepeanya site na iri nri ọhụrụ metụtara mmepeanya. Nke a bụ nkọwa nke sayensị kpọmkwem banyere ngwa ngwa nke ngwa ngwa na obere ụmụaka na Europe.
Ọgwụgwọ appendicitis na CRBM
Na Center for Bio-Medical Research (CRBM), dị ka ọmụmụ ya si dị, mgbagwoju anya appendicitis chọpụtara n'oge dị nnọọ, na-emeso na ọtụtụ mgbe n'ụdị jụrụ nke mbufụt nke mgbakwunye, na a ọnụego ọgwụgwọ nke ruru 90% na ndị ọrịa a gwọrọ. Usoro ọgwụgwọ a dabere na ọgwụ mgbochi anụ ahụ dị nro, ọgwụ ndị na-egbochi mkpali na infusion ị drinkụ ihe ọ drinkụ ,ụ, nke nwere ihe ndị na-egbochi antiseptik, nke sitere na osisi mpaghara site na ụlọ ọgwụ pharmacopoeia Congo.
Ọrịa na-efe efe, Director nke Research Center Bio-Medical (CRBM)
Nlekọta nke appendicitis na ọgwụgwọ ụlọ obibi sitere n'okike
Zụta € 6,94
Oge emelitere ikpeazụ na February 28, 2021 8:53
Abụ m mmadụ - Akwụkwọ edemede (2019)